एन्फाले ग¥यो एएफसी छनोट खेल्ने नेपाली महिला टोलीको घोषणा
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाल एएफसी छनोटको दोस्रो चरण खेल्ने उन्नाईस वर्ष मुनिको नेपाली महिला टोलीको घोषणा गरेको छ । एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक हरि ओम श्रेष्ठको नेतृत्वमा २३ सदसीय टिमको नाम सार्वजनिक गरेको हो । दोस्रो चरणको छनोट अप्रिल २६ बाट ३० सम्म हदैँछ । छनोटको शीर्ष टोलीले एएफसी यू –१९ च्याम्पियनसिपमा स्थान […]
एसिया छनोट : ओमानबिरुद्ध नेपालको शानदार जित (फोटो फिचर)
काठमाडौ । मलेसियामा जारी आईसीसी अण्डर नाईन्टीन एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनोटमा नेपालले ओमानलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । मंगलबार भएको चौंथो खेलमा नेपालले ओमानलाई १ सय ५० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो । तस्वीरमा हेर्नुहोस नेपालको जित तस्वीर : रमन शिवाकोटी
काठमाडौ । मलेसियामा जारी आईसीसी अण्डर नाईन्टीन एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसिया छनोटमा नेपालले ओमानलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । मंगलबार भएको चौंथो खेलमा नेपालले ओमानलाई १ सय ५० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो । मलेसियाको शिलानगोर ट्रफ क्लबको मैदानमा नेपालले दिएको २ सय ३० रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान ४४ ओभर १ बलमा […]
च्याम्पियन्स लिग : बार्सिलोना र युनाईटेड भिड्दै, कस्ले बनाउँला सेमिफाईनलमा स्थान ?
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा आज (मंगलबार) स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र इन्ग्लिश क्लब म्यानचेस्टर युनाईटेडले प्रतिस्पधा गर्दैछन् । बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने १ बजेबाट सुरु हुनेछ । यी दुबै टोली सेमिफाईनलमा स्थान सुरक्षित गर्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन् । दुवै टोलीमा स्टार खेलाडीको बाहुल्यता रहेको छ […]
एजेन्सी । जारी इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा मंगलबार किंग्स ईलाभेन पन्जाब र राजस्थान रोयल्सबीच प्रतिस्पर्धा हुदैँछ । चण्डीगढस्थित पन्जाव क्रिकेट स्टेडियममा घरेलु टोली पन्जाव र राजस्थानबिरुद्धको खेल राती सवा ८ बजेबाट सुरु हुनेछ । दुवै टोलीको लक्ष्य जित निकाल्दै अंक तालिका सुधार गर्नु हुनेछ । घरेलु टोली पन्जाब राजस्थानलाई हराएर लिगमा पाँचौ जित निकाल्ने […]
काठमाडौँ । विश्वकप यु–१९ छनौटको चौथो खेलमा ओमनमाथि सानदार जित हासिल गरेको छ । नेपालले दिएको २ सय ३० रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमनले ४४ दशमलव १ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ७९ रन मात्रै बनाउन सक्यो । मलेसियाको क्वालालम्पुरमा भएको खेलमा टस हारेर व्याटिङ गरेको नेपालका कप्तान रोहित पौडेलले ७५ रन र १० औँ नम्बरमा व्याटिङ […]
काठमाडौँ । एशियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) छनोटको दोस्रो चरण खेल्ने यू–१९ महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीको आज बिहान घोषणा गरिएको छ । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का अनुसार सरु लिम्बूको कप्तानीमा २३ सदस्यीय टोलीको नाम सार्वजनिक गरिएको हो । टोलीमा गोलकिपर अन्जनाराना मगर, रेविका राई, उषा नाथ, डिफेण्डरमा निशा थोकर, सुष्मा महर्जन, रोजिना श्रेष्ठ, समीक्षा घिमिरे, […]
विश्वकप यू–१९ छनोट : नेपालद्वारा मलेसिया ८ विकेटले पराजित
काठमाडौँ । आईसीसी एसिया यू–१९ वर्ल्डकप छनोटको सोमबार क्वालालम्पुरमा भएको खेलमा मलेसियालाई ८ विकेटले पराजित गरेको छ । जितका लागि पाएको ९३ रनको लक्ष्य नेपालले १३ ओभरमा २ विकेट गुमाएर पुरा गरेको हो। नेपालका लागि रित गौत्तम ३९ रन बनाएर नटआउट रहे भने आरिफ सेखले २६ रन जोडे। पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले ३३.५ ओभरमा अलआउट […]
आईपीएल : दिल्लीको खेल आज, सन्दीप टोलीमा पर्लान ?
ऐजेन्सी । जारी इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा आज नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको दिल्ली क्यापिटल्सले सनराईजर्स हैदरावादसंग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । हैदरावादस्थित राजिब गान्धी क्रिकेट मैदानमा हुने घरेलु टोली र दिल्लीबीचको खेल राति सवा ८ बजेबाट सुरु हुनेछ । अहिलेसम्म ७ खेलमा चारमा जित निकालेको सन्दीपको टिम दिल्ली ८ अंक जोड्दै चौँथो […]
एसिया छनोट : दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग १ रनले पराजित
काठमाडौं । मलेसियामा जारी आईसीसी एसिया यु–१९ विश्वकप छनोट अन्तर्गतको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल युएईसँग १ रनले पराजित भएको छ । टस हारेर पहिला व्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २४७ रन बटुलेको थियो । जवाफि व्याटिङमा उत्रिएको युएईले ३० ओभरको सम्माप्तिमा ३ विकेटको क्षतिमा १२२ रन जोड्दा पानी पर्न शुरु भएको […]